www.camaloow.com - News: Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Rabaax, ayaa sheegay roobka oo aad u xooganaa inay ka dhasheen Daadad ayna dileen 6 ruux.
December 10 2018 04:56:28
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Rabaax, ayaa sheegay roobka oo aad u xooganaa inay ka dhasheen Daadad ayna dileen 6 ruux.
<?php </a> Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Gobolka Awdal ee Somaliland, ilaa lix ruux ayaa ku geeriyootay roobab daadad wata oo shalay gelinkii dambe ka daâ€™ay Gobolkaasi, xilli abaaro daran ay ka jireen.
Guddoomiyaha Gobolka Awdal Maxamuud Cali Saleeban Rabaax, ayaa sheegay roobka oo aad u xooganaa inay ka dhasheen Daadad, jabsaday Baliyo ku yaallo dhanka sare ee deegaanka Dila, taasna ay sababtay in daadka uu ku soo rogmado goobo ganacsi iyo guryo.
Caruur iyo dad waaweyn ayeey isugu jira dadka ku geeriyooday daadadkaasi ka dhashay roobka xoogan ee shalay gelinkii dambe ka daâ€™ay deegaano ka tirsan Gobolka Awdal ee Somaliland.
Daadadka oo aad u badnaa ayaa sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in dad badan naftooda ay la baxsadeen, kadib markii ay fuuleen geedo dhaadheer oo ay ganbaad kaga dhigteen daadadka si aysan u qaadin.
Roobkaan xoogan ee shalay gelinkii dambe ka daâ€™ay Gobolka Awdal ayaa ku soo aadaya, iyadoo abaar xoogan ay ka jirtay Deeganada Somaliland, gaar ahaan Gobolka Awdal.
· news on April 07 2016 · 0 Comments · 62931 Reads ·
Render time: 0.02 seconds 28,901,696 unique visits